School of Dragons အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် APK（92.8MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် School of Dragons
မြန်မြန်ပျံသန်း, လေ့ကျင့်ပါ, လေ့ကျင့်ပါ, HICCUP နှင့်သွားမရှိတဲ့ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အိပ်မက်များကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေသည့်စွန့်စားခန်းများကို "သင်၏နဂါးကိုမည်သို့လေ့ကျင့်သင်ကြားရမည် '' ကိုစတင်ပါ။
သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်ကစားခြင်းနှင့်ဤလုပ်ဆောင်မှုထုပ်ပိုးထားသောသင်ယူမှုအတွေ့အကြုံတွင်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောကမ္ဘာများကိုလေ့လာပါ။ DreamWorks နဂါးများကိုကယ်ဆယ်ရန်, မွေးမြူရေးနှင့်လေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်း, Berk နှင့်လျှို့ဝှက်ကမ္ဘာကြီးကိုကာကွယ်ရန်, Grimmel နှင့် Grimmel နှင့် Morkeart ကိုကာကွယ်ပါ။
*** နိုင်ငံပေါင်း 80 တွင်အခန်းကဏ္ play မှပါ0င်သောကစားနည်းများအားလုံး၏နံပါတ် 1 သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။
•သင်၏တည်ငြိမ်သောတွင်းရှိနဂါးများကိုသိုလှောင်ခြင်းနှင့်စုဆောင်းခြင်းနှင့်ရတနာများကိုပြန်ယူရန်နဂါးမစ်ရှင်များ၌သူတို့ကိုပေးပို့ပါ။ •ကျွန်း 30 နှင့်မြေယာ 30 တွင်စွန့်စားပါ။
•ကျွန်ုပ်တို့၏တိုးချဲ့အစီအစဉ်များနှင့် 400 ကျော်ရှိဇာတ်ကောင်အသစ်များနှင့်စွန့်စားခန်းအသစ်များတွင်ဇာတ်ကောင်အသစ်များနှင့်စွန့်စားခန်းအသစ်များကိုဖြည့်ဆည်းပါ။ •နဂါးနည်းဗျူဟာ, > Subscription Options:
ဤ app သည်အသင်း0င်0ယ်ယူမှုရွေးချယ်မှု4ခု - ဒေါ်လာ 9.99 / လ, $ 24.99 /3လ, $ 24.99 /3လ, $ 47.99 /6လနှင့်တစ်နှစ်လျှင်ဒေါ်လာ 84.99 /6လ,
** အသင်း0င်ကြေးပေးသွင်းမှုသည်အလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးလိမ့်မည်။ လက်ရှိကာလမကုန်ဆုံးမီ 24 နာရီအတွင်းသက်တမ်းတိုးရန်အကောင့်ကိုသက်တမ်းတိုးလိမ့်မည်။0ယ်ယူပြီးနောက်အသုံးပြုသူအကောင့်ချိန်ညှိချက်များကို သွား. အလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးခြင်းနှင့်ပိတ်ထားနိုင်သည်။ လက်ရှိကာလမကုန်ဆုံးမီအနည်းဆုံး 24 နာရီအပြီးတွင်အနည်းဆုံး 24 နာရီပိတ်ထားခြင်းမရှိပါက subscription ကိုအလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးသည်။
မှတ်ပုံတင်ခြင်းအချက်အလက်များသည်ရွေးပိုင်ခွင့်ရှိသည် (13 နှစ်အောက်ကလေးများသည်မိဘမှတ်ပုံတင်ခြင်းလိုအပ်သည်) ကလေးသူငယ်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းပညာရေးကမ္ဘာနှင့်ပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်အတူဂိမ်းအသစ်များနှင့်စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များကိုအကြောင်းကြားနိုင်လိမ့်မည်။ ကျေးဇူးပြု. မှတ်သားပါ။ နဂါးကျောင်းသည်ကစားရန်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည်, သို့သော်ဂိမ်းအကြောင်းအရာများ, စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စရာများနှင့်ပစ္စည်းများကမ်းလှမ်းသည် အစစ်အမှန်ပိုက်ဆံနှင့်အတူဝယ်ယူ။ အကယ်. သင်သည်ဤအင်္ဂါရပ်ကိုမသုံးရန်ရွေးချယ်ပါကသင်၏ device ၏ settings မှတစ်ဆင့် In-app ဝယ်ယူမှုများကိုပိတ်နိုင်သည်။
ဘာအသစ်လဲ School of Dragons 3.18.0
HO/Yes GOOD ViP=999999
ဝင်လို့လဲမရဘူး. Pc version လား Ph versionလား